13 May 2015 टेलिभिजन
ग्रान्डीमा सिद्धार्थ वार्ड सञ्चालन
18 April 2015 अनलाइन
काठमाडौं– नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै ग्रान्डी अस्पतालले पाँचसय रुपैयाँको बेडसहित सिद्धार्थ वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ।
किन बांगिन्छ ढाड ? उपचार गर्ने सजिलो उपाय
16 April 2015 अनलाइन
ओखलढुंगाकी ४५ वर्षीया मनीषा मगरलाई दुई वर्षअघि एक्कासि ढाड दुख्ने समस्या देखियो। विस्तारै उठ्नबस्नै समस्या हुन थालेपछि उनले ढाड पनि बांगिएको अनुभव गर्न थालिन्। त्यसपछि उनी आत्तिँदै काठमाडौं आई विभिन्न अस्पताल धाउन थालिन्। एक महिनाअघि धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताल पुगेकी उनलाई चिकित्सकले परीक्षण गर्दै जाँदा ढाड बांगिएको पत्ता लाग्यो। तत्कालै उनको...
कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्यले ३ चैतमा उद्घाटन गरेको ‘सिद्धार्थ वार्ड’ सेवा अन्तर्गत अस्पतालले बेडसहितको उपचार खर्च पाँच सय रुपैयाँ मात्रै लिने जनाएको छ ।
ग्रान्डी अस्पतालको 'हेल्थ फर अल' प्रोजेक्ट
29 March 2015 पत्रपत्रिका
हृदयाघातबारे ८ भ्रम
18 March 2015 अनलाइन
१. बेहोस नै भएको छैन, कहाँ हृदयाघात हुनु?
हृदयाघात मुटुसँग सम्बन्धित कुरा हो। हृदयाघात हुँदा मानिसलाई छातीमा प्रचण्ड पीडा महसुस हुन्छ। छाती दुखाइ ठूलो ढुंगाले थिचेजस्तो, केही कुराले छाती वरिपरि बाँधेकोजस्तो प्रकृतिको हुन्छ। दुखाइ देब्रे पाखुरा, देब्रे चिउँडोतिर पनि सर्नसक्छ। कतिप...
ग्रान्डीको देवघाटमा स्वास्थ्य शिविर
02 February 2015 पत्रपत्रिका
काठमाडौं÷रास– अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरसमेत रहेका बरिष्ठ अर्थाेपेडिक सर्जन डाक्टर चक्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा हाडजोर्नी विभाग र सामान्य चिकित्सा विभागका डाक्टर र नर्सको टोलीले ३ सय बयानब्बेजना भन्दा बढी हाडजोर्नी र सामान्य चिकित्सासम्बन्धी बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी परामर्श दिएका थिए ।
30 November -0001 अनलाइन